१ O अस्कर विजेताहरू जो उनीहरूको अवस्थामा पहिलो थिए ग्याजेट समाचार
१ O अस्कर विजेताहरू जो तिनीहरूको अवस्थामा पहिलो थिए
यो अर्को आइतवार, फेब्रुअरी २ 28, मनाईन्छ हलिउड मा एकेडेमी पुरस्कार। कार्यक्रमको बखत, height 34 सेन्टिमिटर उचाईको ized.3,85 किलोग्राम तौल र सुनको मसलाको बहुमूल्य मूर्ति, दोस्रो प्लानमा बनेको दोस्रो विश्वयुद्धको अवधि बाहेक अरू विजेताहरूलाई रगडिनेछ। लगभग 90 ० वर्षमा जुन हलिउड एकेडेमीले यी पुरस्कारहरू प्रदान गर्दै आएका छन्, त्यहाँ कोही पनि छन् जो उनीहरूलाई पहिलो पटक ग्रहण गर्‍यो। तल हामी तपाईलाई धेरै उत्सुक केसहरूको संकलन देखाउँदछौं।
हट्टी म्याकडानिएल। ऑस्कर जित्ने पहिलो काली अभिनेत्री। यो १ 1940 .० को कुरा हो जब हट्टी म्याकडानिएलले सर्वश्रेष्ठ सहयोगी अभिनेत्रीको रूपमा मूर्ति जित्न सफल भए हावा संग गयोअस्कर जित्न रंगका पहिलो व्यक्ति बन्नुभयो। म्याकडिएनेलले नोकरको भूमिका खेलेका थिए र निश्चय पनि तपाईंले याद गर्नुहुनेछ यदि मैले तपाईंलाई भनेको थिए कि उनका प्रायः दोहोरिएका शब्दहरू "मिस स्कारलेट, मिस स्कारलेट" थिए।
जर्ज सी। स्कट। अस्कर बन्द गर्न पहिलो अभिनेता। स्कटले फिल्मका लागि सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेताको लागि प्रतिमा जित्यो Patton। उनले समारोहमा भाग लिएनन् तर एउटा टेलिग्राम पठाए जसमा उनले भने कि उनले यो स्वीकार्न अस्वीकार गरे किनकि उनी मतदान प्रक्रियासँग सहमत छैनन् किनकि उनका सह-सिताराको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नु कलात्मक हिसाबले गलत थियो।
नॉर्मा शीयरर। उनले जितेका पहिलो व्यक्ति अस्कर घोषणा गरे। १ 1931 in१ मा ऑस्कर पर्वको उत्सवको क्रममा, नोर्मा शियरर सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्रीको विजेताको घोषणा गर्ने जिम्मामा थिए। शियरर दुई भिन्न फिल्महरूका लागि एकै कोटीमा दुई ओस्करको लागि मनोनयन गरिएको थियो। उसले अन्ततः यो फिल्मको लागि जित्यो द डिभोर्सी.
अस्कर जित्न पहिलो रंगीन फिल्म थियो हावा संग गयो। अस्कर नामांकनका लागि पहिलो रंगीन फिल्म थियो एक स्टार जन्मेको छ, तर यो त्यहाँबाट गएन। दुई वर्ष पछि चलचित्र हावा संग गयो यो अस्कर जित्ने पहिलो रंगीन फिल्म बन्यो। कालो र सेतो फिल्महरू १ 1956 XNUMX सम्म सबै भन्दा राम्रो चित्र कोटिमा मनोनयन हुन जारी रह्यो, जसमा nominated जना नामांकित फिल्महरू रंगमा थिए।
ऑस्कर ह्यामरस्टेन। पहिलो व्यक्तिलाई ओस्कर भनिन्छ र ओस्कर जित्छ। को कम्पोजर १ 1942 1946२ र १ XNUMX XNUMX मा अस्कर ह्यामरस्टाइनले आफ्नो क्यारियरमा दुईवटा ओस्कार जित्यो।
टेलिभिजनमा प्रसारित पहिलो समारोह १ 1953 .XNUMX मा थियो। एकेडेमी अवार्ड्सको २th औं वार्षिकोत्सवको उत्सव हलिवुडको आरकेओ पान्टेज थिएटर र न्यू योर्कको एनबीसी थिएटरमा टेलिभिजनमा कालो र सेतोमा प्रसारित हुने पहिलो समारोहको रूपमा काम गर्‍यो। १ 25 .1966 मा पहिलो ऑस्कर समारोह एबीसीमा रंगमा प्रसारित भयो।
पहिलो एक्स रेटेड फिल्म सर्वश्रेष्ठ चित्रको लागि ऑस्कर जित्नका लागि: मध्यरात काउभय। २०१ In मा मध्यरात काउभय दुई वर्ष पछि X. मूल्या rated्कन गरिएको थियो जब यो अस्कर जीत पहिलो फिल्म थियो घडीको सुन्तला यसलाई समान पुरस्कार प्राप्त भयो, जब यसलाई एक्सको रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो। १ 1990 17 ० मा एक्स वर्गीकरण NR-१ to मा पुनःनामाकरण गरिएको थियो, १ years वर्ष मुनिका बच्चाहरूका लागि सिफारिस गरिएको थिएन किनकि उनीहरूले समावेश गरेको यौन र हिंसाको दृश्यका कारण र यसरी सक्षम हुन सक्दछन्। तिनीहरूलाई साँच्चिकै अश्‍लील सामग्रीहरूबाट भिन्न बनाउनुहोस्।
ऑस्कर जित्न पहिलो अनुक्रम: गॉडफादर दोस्रो. यो फिल्म १ 1975 .XNUMX मा सर्वश्रेष्ठ चित्रको लागि अस्कर जित्ने पहिलो अनुक्रम थियो, पहिलो भागले उही मूर्ति जितेको दुई वर्ष पछि।
सर्वश्रेष्ठ महिलाको लागि ऑस्कर जितेको पहिलो महिला: जुलिया फिलिप्स। १ 1974 .XNUMX मा जुलिया फिलिप्सले सर्वश्रेष्ठ चित्रको लागि पहिलो ऑस्कर जित्यो हिट, टोली बिल र निर्माता र पति माइकल फिलिप्सको साथ, पॉल न्यूम्यान र रोबर्ट रेडफोर्डसँग। फिल्मको सफलताले उनको पति माइकललाई जुलियाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो ट्याक्सी चालक दुई वर्ष पछी। पछि उनीहरूले स्टिभन स्पिलबर्ग फिल्ममा पनि काम गरे तेस्रो चरणमा भेट हुन्छ.
सर्वश्रेष्ठ निर्देशकका लागि ऑस्कर जित्ने पहिलो महिला: क्याथ्रीन बिगलो। २०१० मा र ओस्करको 2010२ संस्करण पछि क्याथरिन बिगलो फिल्मको सर्वश्रेष्ठ निर्देशकको श्रेणीमा एकेडेमी पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो महिला बन्नुभयो। शत्रु भूमिमा (हर्ट लकर)। केवल तीन महिलाले पहिले यो पदका लागि आवेदन दिएका थिए: लीना वर्टमलर सात सुन्दरहरू, जेन क्याम्पियनको लागि एल पियानो र सोफिया कोपोलाका लागि अनुवादमा हरायो वर्ष 2004 मा।
नामित हुनका लागि पहिलो एनिमेटेड फिल्म: सौन्दर्य र बिस्ट। यद्यपि यो डिस्ने फिल्म ऑस्करमा जितेन सौन्दर्य र जनावर यो सर्वश्रेष्ठ चित्र कोटीमा नामांकन प्राप्त गर्ने पहिलो फिल्म हो। त्यस बेला देखि Up, २०० in मा र खेलौना स्टोर।२०१० मा, उनीहरूले यी नामांकनहरू पनि प्राप्त गरे। २००१ मा, हलिवुड एकेडेमीले सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कोटि शुरू गर्‍यो।
एउटै भूमिकाका लागि दुई नामांकन प्राप्त गर्ने पहिलो अभिनेता: ब्यारी फिजजेराल्ड। १ 1945 InXNUMX मा, अभिनेता ब्यारी फिजजेरलले एकै फिल्मका लागि दुई उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त गरे मेरो बाटो जाँदै। अन्तमा उसले सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जित्यो। हलिउड एकेडेमीले नियमहरू परिवर्तन गरे ताकि यो फेरि नहोस्।
मरणोत्तर ऑस्कर प्राप्त गर्ने पहिलो अभिनेता: पिटर फिन्च। फिंच मरणोत्तर एकेडेमीको ऑस्कर जित्ने पहिलो अभिनेता थिए, पुरस्कार समारोहको तीन महिना अघि मरे पछि उनलाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेताका लागि मनोनयन गरिएको थियो।
पहिलो थ्रीडी फिल्म नामांकन प्राप्त गर्न: अवतार र युपी। जे होस्, थ्रीडी ढाँचा १3१। देखि यतादेखि टाढा भएको छ, हामीले २०१० सम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्‍यो पहिलो स्टेरियोस्कोपिक फिल्मलाई उत्कृष्ट चित्रको लागि ऑस्करमा मनोनीत गर्नका लागि। यस पटक त्यहाँ दुई थिए: अवतार y UP। दुबैले फिल्मको लागि क्याथरिन बिगलोलाई पुरस्कार हरायो शत्रु भूमि.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » १ O अस्कर विजेताहरू जो तिनीहरूको अवस्थामा पहिलो थिए
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 Vs LG G5, विकासको अनुहारमा निरन्तरता